Why small businesses fail? — Balance Professional Services
လုပ်ငန်းသေးတွေ ဘာလို့ကျရှုံးရတာလဲ? ဘယ်လိုလုပ်ငန်းအမျိုးအစားဖြစ်ဖြစ် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ရတာဟာ မလွယ်ပါဘူး။ အောင်မြင် ကြီးပွားမှုဆိုတာ အချိန်တိုအတွင်း လွယ်လွယ်နဲ့ ဖြစ်လာဖို့ ခဲယဉ်းပါတယ်။ လုပ်ငန်းသေးတွေရဲ့ ၅၀% လောက်က လုပ်ငန်းစတင်ပြီးပထမနှစ်မှာပဲ ကျရှုံးသွားရပါတယ်။ စပြီး ၅ နှစ်လုပ်ငန်းသေးတွေရဲ့ ၈၀% လောက်ထိကျရှုံးကြပါတယ်။
ဒီလိုကျရှုံးမှုတွေဟာ ဘာလို့ဖြစ်လာတာလဲ? အောက်မှာတော့ လုပ်ငန်းသေးတွေကျရှုံးရတဲ့ အကြောင်းအရင်းများကို ဖော်ပြထားပေးပါတယ်။
လုပ်ငန်းတစ်နှစ် (သို့မဟုတ်) တစ်နှစ်ခွဲလောက်လည်ပတ်ရန်အတွက် လိုအပ်သောငွေမရှိပါက လုပ်ငန်းတည်မြဲဖို့ရန် မလွယ်ကူနိုင်ပါ။ လုပ်ငန်းတစ်ခုစတာနဲ့ ချက်ချင်းအမြတ်ရဖို့/အရင်းကြေဖို့ မမျှော်မှန်းပါနဲ့။ မြန်မာနိုင်ငံမှာဆို လုပ်ငန်းတစ်ခု အခြေကျဖို့က အချိန်သုံးနှစ်လောက် တောင့်ခံနိုင်ရမယ်လို့ လုပ်ငန်းရှင်ကြီးတစ်ဦးကပြောဖူးပါတယ်။ ဒီတော့ လုပ်ငန်းမစခင်ကတည်းက ငွေပမာဏ လုံလုံလောက်လောက်ရှိထားပါ။
ကိုယ့် (ကုန်ပစ္စည်း သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှု) ဈေးကွက်ကို သေချာနားမလည်ခြင်း၊ ဖောက်သည်တွေ တွေ အကြိုက်ကို မသိခြင်း
ကိုယ့်ရဲ့ ကုန်ပစ္စည်း သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှု ကိုဝယ်ယူအားပေးမယ့် ဖောက်သည် တွေကဘယ်လိုလူမျိုးတွေလဲ၊ လူကြီးလား၊ လူငယ်လား၊ နယ်ဘက်ကလား၊ မြို့ကြီးတွေကလား၊ အမျိုးသားတွေလား၊ အမျိုးသမီးတွေလား အစရှိသဖြင့် သိသင့်ပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ ဖောက်သည်တွေဆီကို ဘယ်လိုရောက်အောင်ပို့မလဲ၊ ဈေးကွက်ထဲကို ဘယ်လိုပုံစံနဲ့တင်ပို့ ရောင်းချမလဲ?
• Super Market ကြီးတွေမှာတင်မှာလား၊ ရပ်ကွက်တွေထဲက စတိုးဆိုင်လေးတွေကတစ်ဆင့်လား?
• ဖြန့်ချီရေးအပိုင်းကရော ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲ? ကိုယ်တိုင်လား? ဒါမှမဟုတ် ဖြန့်ချီရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုအပ်ပြီးလုပ်ခိုင်းမှာလား?
• ဖောက်သည်တွေ/သုံးစွဲသူတွေက ကိုယ့်ရဲ့ ကုန်ပစ္စည်း သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှု တွေကိုထပ်ခါထပ်ခါ အသုံးပြုမှာလား? တစ်ခါတည်းအသုံးပြုမှာလား?
• ကိုယ့်ရဲ့ Product တစ်ခုရောင်းထွက်ဖို့ ဘယ်လောက်ကြာလဲ?
ကိုယ်ရောင်းချတဲ့ Product/Service ကသင့်တော်တဲ့ဈေးနှုန်း တစ်ခုတော့ရှိရပါမယ်။ သင့်တော်တယ်ဆိုတာက ကိုယ့်အတွက်ရော၊ ဖောက်သည်အတွက်ပါ ပြောတာပါ။ ဒီတော့ ကိုယ်ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုကို သင့်တော်တဲ့ ဈေးနှုန်းတစ်ခု သတ်မှတ်ဖို့ဆိုတာ ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ် (Manufacturing Cost) ကိုသေချာတွက်ချက်ထားရပါမယ်။ ဒီတော့ ဈေးနှုန်းအသက်သာဆုံးနဲ့ ရောင်းမှာလား ဒါမှမဟုတ် Quality အကောင်းဆုံးရောင်းမှာလား? ၂ ခုလုံးကို လုပ်ဖို့ကြိုးစားခြင်းဟာ အရှုံးဘက်ကို ဦးတည်စေနိုင်ပါတယ်။
အတွေ့အကြုံမရှိခြင်းဆိုတဲ့နေရာမှာ လုပ်ငန်းပိုင်းတင်မဟုတ်ပါဘူး။ စီမံခန့်ခွဲခြင်းနဲ့ ပြဿနာဖြေရှင်းရာမှာလည်း အတွေ့အကြုံမရှိတာကို ပြောတာပါ။ ဝန်ထမ်းကောင်းတွေ အလုပ်မှာ ပျော်ဖို့ မြဲဖို့ အတွက်က စီမံခန့်ခွဲမှုကောင်းဖို့လိုပါတယ်။ နေ့စဉ်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ စိန်ခေါ်မှုတွေ၊ ပြဿနာတွေကို ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်ခြင်းမရှိပါက လုပ်ငန်းရေရှည်တည်မြဲဖို့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။
လည်ပတ်ငွေစီမံခန့်ခွဲမှု (Cash Flow Management) ညံ့ဖျင်းခြင်း
လုပ်ငန်းလည်ပတ်ငွေ စီမံခန့်ခွဲမှု ညံ့ဖျင်းတယ်ဆိုတာ ဘာတွေလဲ? ပေးစရာရှိတဲ့ အကြွေးတွေကို အချိန်မှန်ပေးဖို့ ပျက်ကွက်တာ ရးစရာရှိတဲ့ အကြွေးတွေကို အချိန်မှန်တောင်းဖို့ ပျက်ကွက်တာ ငွေဝင် ငွေထွက် မညီမျှတာ စသည်ဖြင့်ပေါ့ဗျာ။
နည်းပညာအသစ်တွေ၊ ဈေးကွက်အတွင်းမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အပြောင်းအလဲတွေကို ပြိုင်ဘက်တွေထက် လက်ဦးမှု မရယူနိုင်ခြင်း/ ခြေတစ်လှမ်းနောက်ကျခြင်း
စီးပွားရေးလုပ်တဲ့အခါမှာ ဈေးကွက်လိုအပ်ချက်တွေ၊ ဖောက်သည်/စားသုံးသူ တွေရဲ့အကြိုက်ဟာ အမြဲတမ်းတသတ်မတ်တည်း ရှိနေမယ်လို့ ယူဆလို့မရပါဘူး။ ပြောင်းလဲလာတဲ့ ဈေးကွက်လိုအပ်ချက်တွေ၊ Customers တွေရဲ့ အကြိုက်တွေနဲ့ အမှီမလိုက်နိုင်၊ မပြောင်းလဲနိုင်ဘူးဆိုရင် လုပ်ငန်းရဲ့ရောင်းအားတွေ ကျဆင်းလာမှာသေချာပါတယ်။ (ဥပမာ။ ။အခု ဒီဂျစ်တယ်ခေတ်ရောက်တဲ့အခါ စာအုပ်အငှားဆိုင်၊ ခွေအငှားဆိုင်လုပ်ငန်းတွေ ပျောက်ကွယ်ကုန်ကြပါပြီ) ကိုယ့်ရဲ့ ပြိုင်ဘက်တွေ ဘယ်လိုလုပ်နေလဲ? နည်းပညာအသစ်တွေသုံးနေလား? Product အသစ်တွေ/ ဝန်ဆောင်မှုအသစ်တွေ ရောင်းနေလားဆိုတာကိုလည်း မျက်ခြေပြတ်လို့ မဖြစ်ပါဘူး။ အဲလိုမှမဟုတ်ရင် ကိုယ့်မှာရှိပြီးသား Customers တွေ၊ Potential Customers တွေက ကိုယ့်ရဲ့ပြိုင်ဘက်ဆီကို ရောက်သွားနိုင်ပါတယ်။
စီးပွားရေးလောကမှာ ပြောစကားတစ်ခုရှိပါတယ်။ "Location! Location! Location!" တဲ့။ နေရာကို သုံးခေါက်ရွက်ပြီး အရေးကြီးပုံကိုဖော်ပြထားတာပါ။ လုပ်ငန်းတည်နေရာက အရေးကြီးပါတယ်။
Customers အနည်းပေါ်တွင်သာ မှီခိုအားထားနေရခြင်း
ကိုယ့်ပစ္စည်းကို တွေအများကြီးဝယ်တဲ့ ဖောက်သည် နည်းနည်းထက်၊ ကိုယ့်ကုန်ပစ္စည်း နည်းနည်းကိုဝယ်တဲ့ ဖောက်သည်အများကြီးက ပိုအရေးကြီးပါတယ်။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ ကိုယ့်ကုန်ပစ္စည်းကို အများကြီးဝယ်တဲ့ လက်ကြီးသမား ဖောက်သည် အနည်းစုကိုသာမှီခိုအားထားနေရရင် သူတို့ကသာ မဝယ်တော့ဘူးဆိုရင် လုပ်ငန်းအပေါ်အများကြီးထိခိုက်မှုရှိနိုင်ပါတယ်။
ဖြေးဖြေးနဲ့ မှန်မှန်သွားတာအကောင်းဆုံးပါ။ စီးပွားရေးနဲ့ ပက်သက်ရင်အလောတကြီးဆုံးဖြတ်ချက်ချတာ၊ လုပ်ငန်းချဲ့ထွင်တာတွေက ဇာတ်သိမ်းမလှတာတွေ များပါတယ်။ လုပ်ငန်းတွေအရမ်းများလွန်းတာကလည်း ကျရှုံးစေတယ်ဆိုတာ ယုံကြည်ဖို့ခက်ရင်ခက်နေပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်အဲဒါက အမှန်တရားတစ်ခုပါ။ စီးပွားရေးကို အလွန်အကြူးချဲ့ထွင်တာဟာ အမြတ်များများရဖို့က မသေချာနိုင်ပေမယ့် ကိုယ့်ဆီကငွေတွေအရင်ကုန်သွားတာတော့ သေချာပါတယ်။
ရှိသမျှအလုပ်တွေ ကိုယ်တစ်ယောက်တည်းလုပ်နိုင်တယ်လို့ ယုံကြည်ခြင်း
လုပ်ငန်းနဲ့ပက်သက်တဲ့ နေရာ၊အလုပ် မှန်သမျှကို လုပ်ချင်တဲ့စိတ်က မကောင်းပါဘူး။ လုပ်ငန်းတစ်ခု စပြီဆိုကတည်းက ကိုယ်တစ်ယောက်တည်း ထောင့်စေ့အောင် လုပ်ဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်သလောက်ပါပဲ။ လိုအပ်တဲ့နေရာမှာ လိုအပ်သလိုဝန်ထမ်းတွေ အချိန်ပိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ်/ အချိန်ပြည့်ပဲဖြစ်ဖြစ် ခန့်ထားရပါမယ်၊ အပြင်ကို Outsource အပ်ပြီးခိုင်းတာတွေလုပ်သင့်ရင်လုပ်ရမယ်။ အဲလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့် ကိုယ်ကပိုအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချရမယ့် အလုပ်တွေအပေါ် ပိုပြီး အာရုံစိုက်နိုင်မှာပါ။
ကိုယ့်လုပ်ငန်းကရတဲ့ ငွေတွေကို ကိုယ်လုံးဝမသုံးရဘူးလို့ ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ ဥပမာ- ပေးရန်ရှိသောအကြွေးများ ပေးချေရမယ့်ငွေများ၊ Marketing & Advertising အတွက်ငွေများ၊ ကုန်ပစ္စည်းမှာရန်အတွက်ငွေများ အစရှိတာတွေကို ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအတွက် အသုံးပြုတာကို ရှောင်ကျဉ်ရပါမယ်။ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး အကြံပြုချင်တာကတော့ ကိုယ်ဟာ ပိုင်ရှင်ပင်ဖြစ်လင့်ကစား ကိုယ့်အတွက် လစာတစ်ခုသက်မှတ်ပြီး လုပ်ငန်းထဲကငွေကိုသုံးစွဲတာအကောင်းဆုံးပါ။
ထက်ခိုင် (Business Development), ရဲရင့် (Client Success Officer)
Business FailureHtet Khaing Hla Soe October 25, 2018 Business Survival, Business Failure, Business Advice
What successful people say about business practice?
Business AdviceHtet Khaing Hla Soe November 7, 2018 Business Advice
Business AdviceHtet Khaing Hla Soe October 24, 2018 Business Advice